Ny masoivoho amerikana any Ekoatera dia nametraka fampandrenesana momba ny dia an-tany lavitra
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny masoivoho amerikana any Ekoatera dia nametraka fampandrenesana momba ny dia an-tany lavitra
Androany ny masoivohon'i Etazonia ao Quito, Ekoatera dia nahazo fampandrenesana fa mitohy ny fanakanan-dalana amin'ny tanàna sy tanàna manerana ny firenena ao anatin'ny fihetsiketsehana mitohy.
Na dia nanambara ny fampiatoana ny fitokonana nataon'izy ireo tamin'ny 4 Oktobra aza ny sendika fitaterana sasany, dia mbola nanohy ny fihetsiketsehana ihany ny vondrona hafa. Ny Masoivoho dia manohy mandray tatitra momba ny fihetsiketsehana sy ny fanakanan-dàlana amin'ny tanàna sy tanàna manerana ny firenena, indrindra amin'ny làlambe Pan-American. Misy ny tatitra momba ny paosin'ny herisetra mifandraika amin'ireo fihetsiketsehana ireo. Mety hikorontana be ny dia mandritra io fotoana io.
Vondron'ireo vazimba teratany, sendika mpiasa, fikambanana sosialy ary vondrona fitaterana sasany no niantso hanao fitokonana nasionaly ny alarobia 9 oktobra 2019. Mety hiditra amin'ny diabe mankany amin'ny foibe manan-tantara ao Quito manodidina ny lapam-panjakana io hetsika io. Mety hisy fihetsiketsehana any amin'ny tanàna sy tanàna hafa.
Ny masoivoho amerikana Quito maharitra sy mpiasa maharitra dia notoroana hevitra mafy mba hijanona ao amin'ny faritr'i Quito metropolitan lehibe kokoa ary hisorohana ny fitsangatsanganana an-tanàna. Ny mpiasan'ny governemanta amerikana mbola tsy eo an-toerana dia asaina mandinika ny dia mankany Ekoatora amin'izao fotoana izao.
Manentana ny olom-pirenena amerikana rehetra izahay mba hihevitra ny fiarovana azy ireo lohandohany ary handinika indray ny dia amin'ny tanàna sy ny faritany. Miangavy ny olom-pirenena amerikana koa izahay mba hiantoka ny fananan'izy ireo rano, sakafo ary solika.
Ny fampahalalana momba ny fihetsiketsehana dia mitatitra am-pahibemaso amin'ny haino aman-jerim-bahoaka ary manentana ny olom-pirenena amerikana izahay hanohy hanara-maso mavitrika ny raharaha mandra-pahatapitry ny fihetsiketsehana. ECU911 dia manome fanavaozana manerana ny firenena amin'ny https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/. Agencia Metropolitana de Transito dia manome fanavaozana amin'ny alàlan'ny Twitter. Araho @AMTQuito na karoka #AMTInforma ao amin'ny Twitter. Raha te handray hatrany ireo fampahalalana azo antoka momba ny fiarovana momba ny toe-piainana any Ekoatora dia miangavy anao mba hisoratra anarana amin'ny Smart Travel Enrollment Program (STEP) ao amin'ny: https://step.state.gov/step/.
Ny sidina dia mety hanohy ny fanafoanana ny fivoahana ao Quito vokatry ny fanelingelenana amin'ny fidirana amin'ny lalana. Ny lalana mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Mariscal Sucre any Quito dia mety hosakanana indraindray. Raha manana sidina voalahatra ianao dia mifandraisa mivantana amin'ny seranam-piaramanidina raha mila fanazavana fanampiny. Azonao atao koa ny manara-maso ny fampahalalana momba ny sidina momba ny Tranonkala seranam-piaramanidina Quito. Mariho anefa fa ny sidina dia azo foanana manakaiky ny ora fiaingana. Tsy nisy fiantraikany tamin'izany ny fitsangatsanganana an'habakabaka avy any Guayaquil.
Boeing ve tsy manan-tsiny sa mbola meloka kokoa amin'ny B737 Max 8
Lehilahy ambony amin'ny Cruise Line norveziana nandao ny toerany